Indlela yokwenza iikopi ezizodwa kwiRuby
Ubunzululwazi bekhompyutha Ruby Programming
Ukwenza iiikopi ezizodwa kwiRuby
by UMichael Morin
Kufuneka ukuba kwenziwe ikopi yexabiso kwiRuby . Nangona oku kubonakala ngathi kulula, kwaye kungenxa yezinto ezilula, ngokukhawuleza ukuba wenze ikhophi yesakhiwo sedatha ngeendidi ezininzi okanye uhlahlo olufanayo kwizinto ezifanayo, uya kufumana ngokukhawuleza kukho imithi emininzi.
Izinto kunye neenkcukacha
Ukuze siqonde oko kwenzekayo, makhe sibone enye ikhowudi elula. Okokuqala, isabelo somsebenzisi usebenzisa uhlobo lwe-POD (Plain Old Data) kuRuby .
Apha, isabelo somsebenzi senza ikopi yexabiso kunye nokunikezela ukuba isebenzise isabelo somsebenzi. Naluphina utshintsho kwi - intando aluyi kubonakaliswa b . Kodwa kuthekani ngenye into eyinkimbinkimbi? Khawuqwalasele oku.
Ngaphambi kokuba usebenze le nkqubo ngasentla, zama ukuqikelela ukuba yintoni isiphumo esiza kuba nayo kwaye kutheni. Oku akufani nomzekelo wangaphambili, utshintsho olwenziwe kwi - b lubonakaliswe b , kodwa kutheni? Oku kungenxa yokuba into ye-Array ayilona uhlobo lwe-POD. Isabelo somsebenzi akenzi ikopi yexabiso, ivele ikopi ikhonkco kwinto yeArray. Iintlobo ze- b kunye ne- b ngoku zibhekisela kwizinto ezifanayo zeArray, naluphi na utshintsho kwiintlobo ezahlukeneyo luya kubonakala kwenye.
Kwaye ngoku uyabona ukuba kutheni ukukopisha izinto ezingento ezincinane kunye nokubhekiselele kwezinye izinto kunokukhohlisa. Ukuba ukwenza nje ikopi yento, uvele ukopishe iingxelo kwizinto ezinzulu, ngoko ikopi yakho ibizwa ngokuba "ikopi engacacanga."
Yiyiphi iRuby enikezelayo: dup and clone
I-Ruby inika iindlela ezimbini zokwenza ikopi yezinto, kubandakanywa enye enokuyenza ukwenza iikopi ezinzulu. Inkqubo ye- Object # iya kwenza ikhophi engachangekanga yento. Ukufezekisa oku, indlela yedatha iya kubiza indlela ye- initialize_copy yeklasi. Oko oku kuyenzeka ngokukodwa kwiklasi.
Kwezinye iiklasi, ezifana ne-Array, iya kuqalisa uluhlu olutsha kunye namalungu afanayo njengento yokuqala. Oku, nangona kunjalo, ayikho ikopi enzulu. Khawuqwalasele oku kulandelayo.
Yintoni eyenzekayo apha? Inkqubo ye-# initialize_copy iya kwenzela ikopi ye-Array, kodwa leyo ikopi yileko ikopi engacacanga. Ukuba unayo nayiphi na iindidi ezingekho ze-POD kwindawo yakho, ukusebenzisa i- dup kuyoba yikhophi epheleleyo. Kuya kuba yinto enzulu nje njengoluhlu oluqala, naluphi na uluhlu olunzulu, ukuhlamba okanye enye into ayiyi kuphinda ikopishwe.
Kukho enye indlela efanelekileyo yokukhankanya, ikhonkco . Inkqubo ye-clone yenza into efanayo nokuphinda kubonakale ngokubaluleka okubalulekileyo: kulindeleke ukuba izinto zizongamela le ndlela kunye nokwenza iikopi ezinzulu.
Ngoko oko kuthethwa ukuthini oku kuthetha ntoni? Kuthetha ukuba nganye iklasi yakho inokuchaza indlela yokwenza i-clone eya kwenza ikopi enzulu yaloo nto. Kwakhona kuthetha ukuba kufuneka ubhale indlela yeklasi nganye nganye kwiklasi oyenzayo.
"I-Marshalling" into enye enye indlela yokuthi "ukuxhathisa" into. Ngamanye amagama, vula loo nto ibe ngumgca womgca onokubhalwa kwifayili onokuyenza "ungatshintshi" okanye "ungaqali" emva koko ufumane into efanayo.
Oku kungaxhatshazwa ukufumana ikopi enzulu nayiphi na into.
b = Marshal.load (Marshal.dump (a))
Yintoni eyenzekayo apha? UMarshal.dump udala "ukulahla" kwinqanaba elidityanisiweyo eligcinwe kwi. Olu lahleko ngumtya womgca womncinci ojoliswe ukugcinwa kwifayile. Ihlala kwimixholo epheleleyo yoluhlu, ikopi epheleleyo epheleleyo. Emva koko, uMarshal.load ulwahlukileyo. Iphawula lo mgca wendlela yamabhinqa kwaye idala uluhlu olutsha ngokupheleleyo, ngezinto ezintsha zeArray.
Kodwa oku kuqhinga. Akusebenzi kakuhle, ayiyi kusebenza kuzo zonke izinto (kwenzekani ukuba uzama ukuhlanganisa uxhumano lwenethiwekhi ngale ndlela?) Kwaye mhlawumbi akukhawulezi ngokukhawuleza. Nangona kunjalo, yindlela elula yokwenza iikopi ezinzulu kwi- initialize_copy okanye i- clone . Kwakhona, into efanayo ingenziwa ngeendlela ezifana ne -_yaml okanye i_xml ukuba unayo iilayibrari ezithwele ukuzincedisa .
"Ifuna" Indlela kwiRuby
Ukusebenzisa i-Case (Switch) Ingxelo yeRuby
Ukufaka i-RVM kwi-Linux
I-Interfaces yomsebenzisi weMifanekiso: Ukufaka i-Tk
Ukuguqula indlela kwiRuby
Imiphumo yoLwazi lokuPhuma
Iimpawu ezimbini ezimbini zeRuby
Umgca wokubeka indawo eRuby
Sawubona, Sinatra! Ukusebenzisa iSinra kwiRuby
Ngaba i-My Homeschooler ifumane iSAT okanye UMTHETHO?
Indlela yokusebenzisa i-Neti Pot
Ukuqokelela Imithandazo ye-Imbolc
Izakhono zokuCinga eziPhambili - UkuCinga okuCwangcisiweyo
Indlela yokwazisa iS
Umoya we-Hollywood Sign
Iincwadi ezili-10 eziphambili zeHockey
Incubus / Demon Ukuhlangana
Izakhiwo kunye neendawo: Isigama esibalulekileyo kwisiNgesi
IBhayibhile YeBhayibhile Ngothando
Inkcazelo yeCultural Hegemony
Ileta Yamkelekileyo Yomfundi
Uthando lokufundisa: Izizathu ezi-7 ozifunayo nguMfundisi wakho
Icebiso lokuPhakamisa iCandelo eliLawulayo elizimeleyo
Iimpawu zeNkqubo zoLwazi
Phezulu 'Ii-80 zeengoma ezihambisana neSaxophone
Mictlantecuhtli - UThixo Wokufa Kwi-Aztec Inkolo
Amanqaku angama-7 wePatrol Characters owaziyo nothando
Iincwadi ezinqatshelwe ngabaMongameli base-Afrika nabaMerika
Inkcazo kunye nemizekelo yokuBhala koBuchule